रोचक तथ्य : को-को हुन् ३३ कोटी देवता ? – Idea Khabar
रोचक तथ्य : को-को हुन् ३३ कोटी देवता ?
आइडिया खबर२०७६ आश्विन २७, सोमबार ०७:२४
जब जब बिज्ञानको विकास हुँदै गयो भगवान प्रतिको मानिसको धारणा बदलिंदै गएको छ । भगवानको बारेमा मानिस सोच्न थालेका छन् । यो सबै धर्मका अनुयाहिहरुमा लागु हुन्छ । भगवान छ या छैन । यकिनका साथ भन्न या प्रमाणित गर्न विज्ञानले समेत सकेको छैन । क्रृष्चियनहरुका परमेश्वर, मुस्लिमहरुका अल्लाहा , त्यस्तै हिन्दुहरुका ३३ कोटी देवता यि सबै मानव सभ्यताको गर्भमैं निहित छ ।
हिन्दुहरुका३३ कोटी देवताको बारेमा हामीले विभिन्न चर्चाहरु सुन्ने गरेका छौं । हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरुमा ३३ कोटी देवी देवताको विभिन्न प्रसङ्ग आउने गर्छन् । तर, के हाम्रा देवी देवता वास्तवमा नै ३३ करोड नै छन् त ? कतै यो एक आलंकारिक मात्रै पो हो कि ? या वास्तविकता के हो त ? भन्ने बारेमा आज केहि चार्चा गर्नेछौं ।
शाकल्यः देवता कति छन् ?
शाकल्यः ती कुन-कुन हुन् ?
शाकल्यः आठ वसु को-को हुन् ?
शाकल्यः एघार रुद्र को-को हुन् ?
२०७६ आश्विन १४, मंगलवार ०१:३८